नयाँ वर्षको दिन यी ६ काम किन गर्ने ? « Janata Samachar
प्रकाशित मिति : 13 April, 2019 8:22 am
सम्बन्धमा रहँदा उनी ४ वटा बच्चाकी आमा बनिन् । समय अगाडि बढ्दै थियो तर, फेरि
२२ वर्षदेखि वेपत्ता व्यक्ति गुगलमार्फत फेला
विलियम नामका ति व्यक्ति सन् १९९७ देखि वेपत्ता रहेका थिए ।
अदालतले बिजनेस ट्रिपका क्रममा कामदारहरु ‘सेक्स’ मा रमाउने घटनालाई कामकै एउटा हिस्साका रुपमा व्याख्या गरेको
कुन बार जन्मने मानिस कस्ता ?
सात दिनमा सात बार पर्दछन् र हरेक बारकाे कारक ग्रह अलग अलग हुन्छन् ।